Ireo no masontsivana ao amin'ny BLU Vivo XL 2 | Vaovao momba ny gadget
Ireo no masontsivana ao amin'ny BLU Vivo XL 2
Miverina miaraka amin'ny BLU izahay, ilay hybrid eo amin'i Shina sy Etazonia izay voarohirohy tamina tantara ratsy kely raha ny momba ny fiainana manokana no resahina, ary toa nanana olana kely izy ireo ka nahatonga ny angon-drakitrao manokana niafara tamin'ny mpizara tany amin'ny toerana iray an'i Azia. Na izany aza, nampanantena izy ireo fa ho tsara ary manala ireo malware rehetra ireo izay mazava ho azy fa "tsy fantany ny fomba nahatongavany tao." Azo antoka, ny orinasa dia mbola matanjaka hatrany amin'ny tsenan'i Amerika Avaratra ary ireo no masontsivana momba ny BLU Vivo XL 2, mora vidy nefa avo lenta.
Ity no fitaovana afovoany an-tsena ananan'ny orinasa eny an-tsena, ary nandalo fanavaozana lehibe izy io. Manomboka amin'ny fahatsiarovana isika RAM, izay sendra tsy latsaky ny 3GB, amin'ny maha fitaovana lalindalina azy, toy ny Huawei P9 Lite. Toy izany koa no mitranga amin'ny mpanera, manohy misafidy mora foana izy ireo, saingy manara-penitra, a MediaTek MT6737T mampanantena fanjifana tena antonony.
Manohy miresaka momba ny fanjifana izahay, tsy misy hafa noho izany 3,150 Mah, tsy dia betsaka, tsy kely, no hanome hiaretana an'io efijery an'ny 5,5 santimetatra misy famahana HD (720p) Mety ho marina izany, ara-drariny Manohy amin'ny fitehirizana anatiny izahay, 32GB, misafidy safidy hafa mitovy amin'ireo marika sinoa toy ny Uhans izay manolotra antsika io fahafaha-manao io amin'ny vidiny mihena tokoa.
Faranantsika amin'ny a Fakan-tsary eo anoloana 8 MP misy zoro malalaka, hamita ny asa amin'ny fakantsary aoriana misy tselatra roa sy sensor 13 MP. Ny zava-drehetra dia manondro fa ity Vivo XL 2 ity dia hitovy vidin'ilay teo alohany, manodidina ny 150 euro, ny vidiny ambany indrindra raha raisintsika ny zavatra atolotray azy, na dia ampitahantsika amin'ny fomba hafa sinoa aza izany. Saingy mazava ho azy, vita amin'ny plastika izy io, ary afaka mangataka kely kokoa amin'ny fiheverana ny vidin'ny vidiny isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ireo no masontsivana ao amin'ny BLU Vivo XL 2
Pioneer dia manolotra ny 4K Desktop PC Blu Ray Recorder
Ny Meizu Pro 7 dia hametaka ny Snapdragon 835